Garabka Isbahaysiga KULMIYE Oo Si Rasmi ah Ugu Biiray Xisbgia WADDANI – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Shir jaraa’id oo ay maanta si wadda jir ah u qabteen Garabka Isbahaysiga KULMIYE iyo xisbiga WADDANI ayaa shaaca laga qaaday in garabku maanta uu si rasmi ah ugu biiray xisbiga WADDANI.
Shirkan jaraa’id oo ay ka qayb-galeen dhamaan masuuliyiintii ku hadhay Garabka Isbahaysiga KULMIYE ee ay hogaaminaayey Wasiirkii Hore Maxamed Biixi Yoonis iyo Wasiirkii hore ee madaxtooyadda Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Hogaanka xisbiga WADDANI Gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo masuuliyiinta kale ee xisbigaasi.
Afhayeenka Garabka Isbahaysiga KULMIYE Xuseen Axmed Caydiid & Xoghayaha warfaafinta ee xisbiga WADDANI Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa si wadda jir ah warbaahinta ula hadlay waxaanay xaqiijiyeen in garabkii isbahaysiga KULMIYE uu si rasmi ah ugu biiray xisbiga WADDANI wadahadalo muddo dheer u socday.
Halkan ka daawo shirka jaraa’id ee ay qabteen laba dhinac ee isku biiray oo aanu ka soo xiganay Channelka HCTV.
Tags: isbahaysiga KULMIYE, WADDANI